(၁) ဗုဒ္ဓဘာသာနာဇီလက်သစ် အုပ်စုကို အရေးမယူဘဲ နိုင်ငံတော်မှ မျက်နှာသာ ပေးထားခြင်း။
(၂) လူနည်းစုမွတ်စလင်များအား မျိုးဖြုတ်သုတ်သင်ရန် လက္ခဏာများ မြင်တွေ့နေရသော်လည်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်မှာ အရေးယူဆောင်ရွက်မှု မရှိခြင်း။
(၃) ပြဿနာများဖြစ်ပေါ်နေစဉ်တစ်လျှောက်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်သည့် အတိုက်အခံများ(အများစု)က လစ်လျူရှုထားခြင်း တိြု့ဖစ်သည်။
မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး ဒီဗီဒီများ၊ စီဒီခွေများနှင့် အခြား ၀ါဒဖြန့်ချိသည့်အရာများအားလုံးကို မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် အလွယ်တကူ တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ပို၍ပွင့်လင်းလာသည့်တိုင်းပြည်ရှိ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး အချက်အလက်များ၊ အမုန်းတရားများကို ဖြစ်ပွားစေနိုင်သည့် ရှုထောင့်များမှပြောဆိုမှုတို့မှာ တရားဝင် ပုံစံမျိုး ဖြစ်နေသည်။ သတ္ထုတွင်းဝန်ကြီးဌာန၏ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုနှင့်ပက်သက်၍ သတင်းဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်ကို ဖော်ပြခဲ့သော the Voice Weekly ဂျာနယ်ကို အစိုးရမှ တရားစွဲခဲ့သော်လည်း တိုင်းပြည်အတွင်းရှိ မွတ်စလင်များအား အသရေဖျက်မှုများ၊ မွတ်စလင်များနှင့် ပက်သက်သည့် ကောလဟလများ၊ တလွဲတချော်အချက်အလက်များအား ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ရိုက်နှိပ်ဖြန့်ဝေနေမှုများကိုမူ မည်သို့မျှ ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိသေးပေ။ သို့ဖြစ်၍ တိုင်းပြည်ကို “ မွတ်စလင်များ၏သင်္ချိုင်း ” အသွင်သို့ ပြောင်းလဲရန် မီဒီယာအမျိုးမျိုးမှလှုံ့ဆော်မှုများကို ရပ်တန့်စေခြင်းအစား – ၀န်ကြီးဌာနများ၏ စာရိတ္တပျက်ပြားမှုအား မှန်မှန်ကန်ကန်ဖော်ထုတ်မှုနှင့် ပက်သက်သောကိစ္စ၌ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရမှ ပိုမို စိုးရိမ်နေသည်ကိုသာ ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့နိုင်သည်။
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရသည် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကိုဦးတည်သော အကြမ်းဖက်မှုများဖြစ်ပွားအောင် စီစဉ်နေသူများ၊ အမုန်းတရား ဖြန့်ဝေနေသူများအား စံနစ်တကျ ဟန့်တားမှု မရှိလျှင်၊ မွတ်စလင်များနှင့်အတူ အခြား တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများအပေါ် ကာလကြာရှည်စွာ ရာဇ၀တ်မှု ကျူးလွန်နေသူများအား လစ်လျူရှုထားမှုကို အဆုံးမသတ်နိုင်ပါလျှင် - ၉၆၉ ပြန့်ပွားမှု အန္တရာယ်မှသည် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုများထံသို့ ရောက်ရှိသွားပေလိမ့်မည်။ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆီသို့ ဟန်ရေးပြ လျှောက်လှမ်းနေသော်လည်း အာဏာရှင်ဟောင်း အများစုပါဝင်သည့် စစ်တပ်က ကျားကန်ပေးထားသော ဦးသိန်းစိန်အစိုးရမှာ အတိုက်အခံအဖွဲ့များကို နှိမ်နှင်းရာတွင် စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းထားသည့် နှစ်ပေါင်းငါးဆယ်ကျော် အတွေ့ကြုံကောင်းရှိခဲ့ကြသည်။ လူထုကြားထဲတွင် ၎င်းတို့မှ မပျံ့နှံ့စေချင်သော သတင်းများ၊ လှုံ့ဆော်မှုများကို စစ်တပ်မှ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ ထိထိရောက်ရောက် ထောက်လှမ်း ဟန့်တားနိုင်ခဲ့ကြပေသည်။
ဟောင်ကောင်တက္ကသိုလ်မှ ဆရာတစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ ယခုတွင်မူ ဦးသိန်းစိန်၏ ထိပ်တန်းအကြံပေးတစ်ယောက်ဖြစ်ကာ အစိုးရက ဖွဲ့စည်းပေးထားသော မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေး စင်တာ Myanmar Peace Center (MPC) တွင် ပါဝင်ညွှန်ကြားနေသူ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သော ကျော်ရင်လှိုင်သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ် Fletcher Forum of World Affairs ထုတ် “ Challenging the Authoritarian State: Buddhist Monks and Peaceful Protests in Burma Issues and Policy ” ဆောင်းပါးတွင် မွတ်စလင် ဆန့်ကျင်ရေး အဓိကရုဏ်းများ၌ စစ်တပ်၏ အဓိကအခန်း ကဏ္ဍကို အောက်ပါကဲ့သို့ ရေးသားဖော်ပြထားခဲ့သည်။
“ ၁၉၉၇ ခုနှစ်က မန္တလေးရှိ ထင်ရှားသော ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် တစ်ဆူအား ဒေသတွင်းရှိ ဗိုလ်ချုပ်များ၏ သံသယဖြစ်ဖွယ်ပြင်ဆင်မှုကို သံဃာတော်များမှ ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမည့် အစီအစဉ်အား စစ်အစိုးရမှ သတိပြုမိခဲ့သည်။ သံဃာတော်များ ဆန္ဒမပြနိုင်မီ မွတ်စလင်စီးပွားရေးသမားတစ်ဦးက ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသမီး တစ်ဦးကို မုဒိန်းကျင့်သည် ဟု ကောလဟလတစ်ခု ထွက်ပေါ်လာသည်။ သံဃာတော်များမှ ဗိုလ်ချုပ်များအပေါ်ရည်ရွယ်ထားမှုအား အစိုးရက မွတ်စလင်ဘက်သို့ ပြောင်းပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် မွတ်စလင် ဆန့်ကျင်ရေး အဓိကရုဏ်းတစ်ခု ဖြစ်လာစေခဲ့သည်။ သံဃာတော်များ၏ အစိုးဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုများအား တားဆီးရန်အလို့ငှာ မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး အဓိကရုဏ်များကို ထောက်လှမ်းရေးများက ရံဖန်ရံခါ သွေးထိုးလှုံ့ဆော်ပေးလေ့ရှိသည် ဟု လေ့လာသူအချို့က ယူဆကြသည်။” (စာမျက်နှာ ၁၃၇-၁၃၈)
ပြီးခဲ့သည့် မတ်လ ၃၀ရက်နေ့တွင် “ The Disorder in Order: the Army-State in Burma since 1962 ”, စာအုပ်ကို ရေးသားသူ ပရော်ဖက်ဆာ Donald Seekin က မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့ထုတ် နယူးယောက်တိုင်မ်းသတင်းစာတွင် ပါလာသည့် ‘ Kristallnacht in Myanmar ’ ဆောင်းပါးကို ထောက်ခံ၍ ဤကဲ့သို့ မှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်။
“ မွတ်စလင်မုန်းတီးမှုဟာ မြန်မာလူထုထဲမှာ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းကို အမြစ်တွယ်နေပါပြီ။ ပြီးတော့ ဒီမုန်းတီးမှုကို ၁၉၆၂ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွင်း ဦးနေ၀င်းနဲ့ စစ်အစိုးရလက်ထက် တစ်လျှောက်လုံး အားပေးအားမြှောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့အကြိုက်ဆုံး လှုံ့ဆော်မှုနည်းလမ်းကတော့ မွတ်စလင်က ဗုဒ္ဓဘာသာ ဗမာအမျိုးသမီးကို မုဒိမ်းကျင့်တယ် ဆိုပြီး ကောလဟလသတင်း ဖြန့်မယ်၊ ပြီးတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အားလုံးကို မွတ်စလင်တွေ ဘက် မြှားဦးလှည့်သွားအောင် အကွက်ဆင်တာပါပဲ။ အရင်အစိုးရက သုံးခဲ့တဲ့ သွေးခွဲအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဟာ တစ်ခါတုန်းက ဗြိတိသျှအစိုးရရဲ့ပေါ်လစီဖြစ်ပြီး လူအဖွဲ့အစည်းအများအပြားထဲမှာ စည်းလုံးမှုအနည်းဆုံး ဖြစ်သွားစေတဲ့ပုံစံပါ ”။
မြန်မာစစ်အာဏာရှင်များသည် ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ် နှင့် မဟာဗျူဟာအတွက် လူမျိုးပေါင်းစုံရှိသော မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးကို အသုံးချ၍ အမြတ်ထုတ်ခဲ့သည့် သမိုင်းကြောင်းများ ထင်ထင်ရှားရှားရှိခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေးတွင် စစ်တပ် နှင့် ထိပ်တန်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ၏ အာဏာရှင်စံနစ် အုပ်ချုပ်မှုမျိုး မရှိတော့ပါက ပြည်သူလူထုထံ၌ လုံခြုံမှု မရှိနိုင် ဟူသည့် အယူအဆအပါအ၀င်၊ ထိုကဲ့သို့ မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး အမုန်းတရားများ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ပျံနှံ့စေမှုကို ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်အတွက် လိုချင်ကောင်းလိုချင်လိမ့်မည်ဟု ရှင်းပြရန်ပင် မလိုအပ်ပေ။
တိုင်းပြည်အတွင်း ဘာသာရေးအရ သဟဇာတဖြစ်ရေး နှင့် အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေး စကားတစ်ချို့ကို ပျော့ပြောင်းစွာထုတ်ဖော်ပြောကြားသော်လည်း သမ္မတဦးသိန်းစိန်မှာ နာဇီလက်သစ် ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် ယခုအချိန်အထိ မည်သည်ကိုမျှ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိသေးပေ။ တိတိကျကျ ဆိုရလျှင် နေပြည်တော်အစိုးရ၏ မဟာဗျူဟာမြောက် တွက်ချက်လုပ်ဆောင်မှုအတွင်း၌ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် စီးပွားရေးတွင် ပြိုင်ဘက်မရှိ ထိန်းချုပ်မှုနှင့်လွှမ်းမိုးမှုများ ရရှိလာရန်အတွက် အစဉ်အမြဲအသုံးပြုလေ့ရှိခဲ့သော သွေးခွဲအုပ်ချုပ်ရေးနည်းလမ်းအပါအ၀င် -ကြောက်ရွံမှု၊ မသေချာမှုများ ကိန်းအောင်းနေသောအခြေအနေကို ဖန်တီးရန် ထိုအကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှုတို့အား အရေးမယူဘဲ ပိုမိုလစ်လျူရှုထားမည့် ပုံသဏ္ဍာန် ရှိနေလေသည်။
** ငြိမ်းချမ်းရေး၏ ပြယုဂ်ဖြစ်သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် သူမကိုထောက်ခံသူ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအကြားရှိ အကြမ်းဖက်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုအရှိန်ကို ရပ်တန့်စေရန် မည်ကဲ့သို့ဆောင်ရွက်နေသနည်း ?
မွတ်စလင်များကို အဆက်မပြတ် အကြမ်းဖက်မှုများ၊ မွတ်စလင်နှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာ လူ့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ရပ်အကြား သေကြေပျက်စီးမှုများအတွက် သူမ၏ နှုတ်ဆိတ်နေမှုက အစ္စလာမ်ကြောက်ရောဂါနှင့် အမုန်းတရားများ ပျံ့နှံ့နေမှုတွင် သူမကိုပါ ကြံရာပါဖြစ်စေသလားဟု နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်ရသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ
၁။ အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် အမုန်းတရားဖြန့်ဝေမှုများက မွတ်စလင်များကိုသာလျှင် တိုက်ရိုက် ပစ်မှတ်ထားနေခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ထိုလုပ်ရပ်များကို အခင်းဖြစ်ပွားရာမြို့တွင်းရှိ လူများ နှင့် မြို့ပြင်ရှိလူများက အစီအစဉ်ရှိရှိပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြခြင်း။
၂။ မွတ်စလင်များ(အပါအ၀င် ကချင် ကဲ့သို့ အခြားလူနည်းစုများ) က အကြမ်းဖက်မှုများ၊ သေကြေမှုများ၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကို ခါးစည်းခံနေရခြင်း။
၃။ စစ်တပ်နှင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တို့အနေနှင့် လူအုပ်စုများကို ထိန်းသိမ်းရာ၌ နှစ်ပေါင်း ၅၀ အတွေ့အကြုံရှိခြင်း
စသည်တို့ အပါအ၀င် ရှင်းလင်း ထင်ရှားသည့် အချက်အလက်များကို သူမက လျစ်လျူရှုခဲ့သည်။
စင်စစ်၌မူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာ မွတ်စလင်များအား အကြမ်းဖက်မှုအပေါ် လုံးဝ နှုတ်ဆိတ်နေခဲ့သည်တော့ မဟုတ်။ မိတ္ထီလာမြို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော သုံးရက်တာ ကြာမြင့်သည့် မွတ်စလင်များအပေါ် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ ပြီးဆုံးသွားပြီးနောက်၊ အကြမ်းဖက်လူအုပ်စုကြီးမှ ထင်တိုင်းကြဲ သတ်ဖြတ်မှုများ၊ မီးရှို့မှုများ ပြုလုပ်နေစဉ်တွင် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှာ ထိန်းသိမ်း အရေးမယူဘဲ ရပ်ကြည့်နေသည့် ခိုင်လုံသော အထောက်အထား အများအပြား ရှိသော်လည်း၊ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ အကြမ်းဖက်မှု အခြေအနေကိုင်တွယ် ထိန်းသိမ်းပုံများအပေါ် သူမက ကာကွယ်ပြောဆိုသွားခဲ့သည်။ သုံးရက်အတွင်း လက်နက်များ ကိုင်ဆောင်ထားသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အုပ်စုက ဗလီများ၊ မွတ်စလင်များ၏အိမ်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အပါအ၀င် အဆောက်အဦးပေါင်း ၁၀၀၀ နီးပါး ဖျက်ဆီးခဲ့ခြင်းကို လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက လွှတ်ပေးထားခဲ့သည်။ အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် ဒေါ်စုကြည်က လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ တမင်သက်သက် အရေးမယူခြင်းကို “ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှာ တိုင်းပြည်၏ ဒီမိုကရေစီ အပြောင်းအလဲတွင် အဓိကရုဏ်များကို ထိန်းသိမ်းသော အတွေ့အကြုံ မရှိသေး ” ဟု ဆင်ခြေပေး၍ ကာကွယ်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါသည်။
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် မြန်မာစစ်တပ်တို့ ပူပေါင်း၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသော မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းရှိ သတ္ထုတွင်းတစ်ခုတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဆန္ဒပြမှုများ၊ ဆန္ဒပြသူတို့ကို အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ဖွဲ့စည်းထားသော စုံးစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်၏ ဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်သော သူမ၏ အဆိုပါ မှတ်ချက်က လယ်ယာမြေ ဆုံးရှုံးသူများ နှင့် ၄င်းတို့ကို အားပေးထောက်ခံကြသော သံဃာတော်များအား လူစုခွဲရန် ဖော့စ်ဖော့ရပ်စ် ထည့်ထားသော မီးလောင်ဗုံးများကို အသုံးပြုခဲ့ကြသည့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏လုပ်ရပ်အား လျစ်လျူရှုထားသကဲ့သို့ ဖြစ်နေလေသည်။ ၄င်းအပြင် မကြာသေးမီက ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မိတ္ထီလာအကြမ်းဖက်မှု၌ ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြသော မွတ်စလင်များ(နှင့်အခြားဒုက္ခသည်များ)ထံ သွားရောက်အားပေးရမည့် အစား ဒေါ်စုကြည်မှာ မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့က ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော တပ်မတော်နေ့အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများနှင့် တရင်းတနှီး တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
** မကြာသေးမီက ဖြစ်ပေါ်သွားခဲ့သည့် အကြမ်းဖက်မှုများ နှင့် ကောလဟလများက မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး၌ ပါဝင်စေဖို့ လူအများကို ဆွဲဆောင်တော့မည်လော ? ၄င်းပြင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တွေ့ရသည့် အစ္စလာမ်သာသနာနှင့် ပက်သက်၍ ချဲ့ကားပြောဆိုထားသော ကောလဟလများက မည်သည့်နေရာမှ အစပြုခဲ့ပါသနည်း ?
လွတ်လပ်သော၊ ပရိုဆန်သော သတင်းထုတ်ပြန်မှုများ နှင့် ရွေးကောက်ပွဲများ မရှိဘဲနှင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများမှ အုပ်ချုပ်မှုအာဏာကို ရယူခဲ့စဉ်ကတည်းက မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့် နိုင်ငံရေးလောကတို့တွင် ကောလဟလများက ရာစုနှစ်ဝက်ကြာအောင် အသက်သွေးကြော ဖြစ်ခဲ့သည်။ စစ်တပ်မှ ၀ါဒဖြန့်သော လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဇာတ်လမ်းများ၊ အသရေဖျက်မှုများနှင့် ကောလဟလများကြားတွင် မြန်မာလူထုမှာ နစ်မြုပ်နေခဲ့သည်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးခေတ်တွင်ပင် လွတ်လပ်သော မီဒီယာများက အစွန်းရောက်မျိုးချစ်စိတ်များဖြင့် အမျိုးသားရေးဆိုင်ရာကြောက်ရွံ့မှုများ၊ မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေးများအတွက် လှုံ့ဆော်ရာတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ရံဖန်ရံခါ ပါဝင်နေပေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ လူဦးရေ သန်း ၆၀ ၏ လေးရာခိုင်နှုန်းမျှသာရှိသော မွတ်စလင်များမှာ ကြောက်ရွံ့ ထိတ်လန့်လျက်ရှိနေကြပေသည်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း ဇော်ဌေး(မှူးဇော်)ကိုယ်တိုင်ကပင် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ဇွန်လက ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ရိုဟင်ဂျာများအား အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု ပထမလှိုင်း စတင်ကတည်းက မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး ကောလဟလများ၊ မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံမှုများ၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်နေခဲ့သည်။ သူ၏ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှ မွတ်စလင် ဆန့်ကျင်ရေးနှင့် အမုန်တရားများကို မီးထိုးပေးသည့် တဖက်သတ်အမြင်များစွာကို လွှင့်တင်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့် “ လက်နက်ကိုင်မွတ်စလင် အကြမ်းဖက်အုပ်စုတစ်စု မြန်မာ – ဘင်္ဂလားနယ်စပ်ကို ဖြတ်ကျော်လာနေတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့သတင်းရပါတယ်။ ဆက်လက် စောင့်မျှော်နေပါရန် ” ဟူသည့် သတင်းကို လွှင့်တင်ခဲ့လေသည်။
ထိုစဉ်က နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများကလည်း ‘ ကုလား ’ ဟူသည့် အသုံးအနှုန်းကို အသုံးပြု၍ မွတ်စလင် ဆန့်ကျင်ရေး ရှုထောင့်မှ ဆောင်းပါးမြောက် များစွာကို ရေးထား ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ထို ‘ ကုလား ’ ဟူသည့် အသုံးအနှုန်းမှာ မွတ်စလင်များနှင့် အိန္ဒိယတိုက်သားများကို ရည်ညွှန်းသည့် အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပြီး၊ အင်္ဂလိပ်စကားလုံး niger (ငမဲကောင်) နှင့် အဓိပ္ပါယ်အားဖြင့် အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များ နှင့် ၀ါဒဖြန့်အေဂျင်စီများ၊ ရိုးရာဓလေ့ ထုံးတမ်းအရ သြဇာရှိသူများ၊ နိုင်ငံရေးအရ သြဇာရှိသူများက မွတ်စလင် ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကို ချိန်သားကိုက်မီးထိုးပေးခဲ့ကြပြီး၊ လူထု၏ ထင်မြင်ချက်မှာလည်း ၎င်းတို့နောက်သို့ လိုက်သွားကြသည်။ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအရ သံဃာတော်များမှာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ၊ အတိုက်အခံများထက် ဗမာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်း ပို၍သြဇာညောင်းသည်။ နိုင်ငံရေးသဘောတရားအရကြည့်လျှင် လူမျိုးရေးခွဲခြားတတ်လေ့ရှိသော လူထုမှာ အစိုးရဘက်မှလာသော အခြား အကြောင်းအရာများနှင့် ပက်သက်သော သတင်းများကို သံသယဖြစ်ကြသည့်တိုင် အစိုးရ၏ မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး ကောလဟလသတင်းများ၊ လုပ်ကြံဇာတ်လမ်းများကိုမူ ယုံကြည်ဟန်ရှိသည်။
အစိုးရ၏ မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများ၊ ၀ါဒဖြန့်ချီမှုများ နှင့် ထိုလုပ်ငန်းများကို ပင်တိုင်ဆောင်ရွက်နေကြသော သြဇာညောင်းသည့် သံဃာများအကြားမှ ပတ်သက်ဆက်ဆံရေးကို ဆန်းစစ်ရန် အလွန်ပင် ခက်ခဲလှသည်။ မိတ္ထီလာတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် သေကြေပျက်စီးမှုများအပါအ၀င် ဖေ့စ်ဘုတ် စာမျက်နှာပေါ်၌ လွှင့်တင်ထားသော မွတ်စလင် ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကို လူထောင်ပေါင်းများစွာက ‘ like ’ လုပ်ထားပြီး၊ မြန်မာလူမျိုးများ၏ အားပေးအားမြှောက်ပြုသံများ၊ နာဇီလက်သစ်အမြင်များကို တွေ့မြင်နေရသည်။
၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည့် ဆရာတော်ဝီရသူနှင့် မကြားသေးခင်က ပြုလုပ်သည့် အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် သူက မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားသူများ၏ အကြမ်းဖက်မှုများကို တားမြစ်ခဲ့သည် ဟု အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များကို ရှုတ်ချသယောင် ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
** ဦးဝီရသူ၏ အပြောတစ်မျုိုးအလုပ်တစ်မျိုး နှုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စည်းမစောင့်ထိန်းမှုများက မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ မွတ်စလင်တို့အား ရှင်းလင်းရန်အတွက် ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုဆက်လက်ဖြစ်ပွားစေရန် လှုံ့ဆော်နေဦးမည်လော ?
မြန်မာဘာသာဖြင့်လွှင့်တင်ထားသော သူ၏ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာတွင် အခဲမကြေနိုင်သော ဇာတ်လမ်းများစွာကိုရေးသားထားသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ နံနက်ပိုင်းတွင် မေတ္တာတရား၊ ဘာသာရေးအရ သည်းခံနိုင်မှုနှင့်ပက်သက်သည့် ဆောင်းပါးများကိုရေးသားထားပြီး၊ ထိုနေ့ ညနေပိုင်းတွင်မူ မွတ်စလင်မိသားစုမှ ဗမာအမျိုးသမီးကို လက်ထပ်၍ အတင်းအကြပ်ဘာသာပြောင်းခိုင်းခြင်း၊ ဗမာအမည်မှ မွတ်စလင် အမည် သို့မဟုတ် အိန္ဒိယအမည်သို့ ပြောင်းခိုင်းခြင်းကို သတိပေးခြင်း အပါအ၀င် အန္တရာယ်ရှိသည့် မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး ဆောင်းပါးများကို ရေးသားဖော်ပြထားပြန်သည်။
၂၀၀၃ ခုနှစ် ကျောက်ဆည်မြို့တွင် မွတ်စလင်မိသားစုအား နေအိမ်ထဲ မီးလောက်တိုက်သွင်း သတ်ဖြတ်ခဲ့သောအကြမ်းဖက်မှုကို လှုံ့ဆော်ခဲ့မှုကြောင့် အကျဉ်းကျခဲ့ရသူ ဦးဝီရသူကဲ့သို့ ဘုန်းကြီးအနေနှင့် ဤကဲ့သို့သောလုပ်ရပ်များကိုထောက်၍ သူ၏အကြမ်းဖက်မှု လှုံ့ဆော်တရားများအတွက် နောင်တရခဲ့သည့် အသွင်သဏ္ဍာန်မျိုး မရှိပေ။ မကြာသေးခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေးအကြမ်းဖက်မှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သော သူ၏အခန်းကဏ္ဍနှင့်ပက်သက်၍ ယနေ့အချိန်အထိ နောင်တရသည့်လက္ခဏာကိုလည်း မပြသသေးချေ။
လွန်ခဲ့သည့် ၁၀ နှစ်ခန့်က ၀ီရသူမှာ မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေးအမြင်များကို ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ ဖြန့်ဝေသူဖြစ်ပြီး လူသိနည်းသည်။ ယခုတွင်မူ နိုင်ငံတော်မှ ပစားပေးထားသော နာဇီလက်သစ်လှုပ်ရှားမှု ထွက်ပေါ်လာခြင်းနှင့်အတူ ဘာသာရေးအခြေပြု အမုန်းတရားများကို ဖြန့်ဖြူးသူဖြစ်လာခဲ့ပြီး၊ နိုင်ငံတကာ မီဒီယာများမှ တွေ့ဆုံရမည့် လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ နာဇီလက်သစ် ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးအား လူကြိုက်များလာမှုမှာ တိုင်းပြည်၏ အနာဂတ် ဒီမိုကရေစီ အပြောင်းအလဲအတွက် အတိတ်နိမိတ် မကောင်းတော့သလို မွတ်စလင်များနှင့်ရိုဟင်ဂျာများကဲ့သို့ အခြားလူနည်းစုများ အတွက် လည်း ကောင်းမွန်သော အနာဂတ် မဖြစ်နိုင်ချေ။
ဦးဝီရသူသည် စစ်ထောက်လှမ်းအရေး အကြီးကဲဟောင်း ဦးခင်ညွန့်၊ စစ်တပ်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့် အာဏာရ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ အတိုင်ပင်ခံ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်း ဦးအောင်သောင်း အပါအ၀င် ယခင်အာဏာရှင် လက်ထက်က အစိုးရအရာရှိများ အချို့နှင့် အနီးကပ် ဆက်ဆံရေး ရှိနေသည်ဟု ပြည်တွင်းရှိ ဝေဖန်ဆန်းစစ်သူများမှ အချိန်အတော်ကြာကပင် သံသယ၀င်နေခဲ့ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ပါဝင်ပတ်သက်နေမှု အနေအထားများကြောင့် – “ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များက နိုင်ငံအတွင်းရှိ လူနည်းစုမွတ်စလင်များအား တိုက်ခိုက်နေသည်ကို ဦးသိန်းစိန်အစိုးရမှ အဘယ့်ကြောင့် အရေးမယူဘဲ ရှိနေသနည်း ” ဆိုသည့်မေးခွန်းအတွက် အလွန်ပင်ရှည်လျားစွာ ဖြေကြားရှင်းပြရပေဦးတော့မည်။
မောင်ဇာနည်ရေးသားသော Myanmar’s neo-Nazi Buddhists get free rein ဆောင်းပါးကို ဇင်ဝေ မှ ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။
မောင်ဇာနည် is no more than one of the myanmar public enemies like your group.
Kyote ta khu pyaw chin tae. Bamar tway ko ta-yoke (Chinese ) lo tar Nay Win let htet ka nay Than Shwe lat htet ahti so yin....a khu Bamar twayaknone lone phar pyit kone pyi. Kyi ya tar ta-yoke ( Chinese ) lee ko bamar tway kyike pone ya dae. Kway ma thar tway....ta-yoke ko phin khan pyee ta-yoke lee sote ya dar taw tawaya thar shi pone ya dae. min dot bamar tway ko ka-lar lote lotamyo phyote hmar ma hote bu. ta-yoke phyote lot min dot bamar twayamyo phote tawt mae. Hmart htar gya.
စာရေးသူကို လီးပဲကွာ မင်းဟာကို တစ်ဝက်လောက်ဖတ်ပြီး မင်းကို ထိုးချင်စိတ်ကလွဲလို့ ဘာခံစားချက်မှ မရှိဘူး မြန်မာပြည်ကို တစ်သက်ခြေမချနဲ့ သေမယ်ကုလားမျိုးကောင် မင်းအဖေ အမေရိကန်တောင် မွတ်တွေကို တစ်ကယ်လိုလားရဲ့လား သမိုင်းတစ်လျှောက်ပြန်ကြည့် ဒီနေ့ထိစစ်ဆင်နေတုန်း မွတ်တွေကလဲ အမေရိကန်ဆို အသေအကြေပဲ ဘာကြောင့်လဲ မင်းချီးဘရိန်းက သိမှာပါ
မင်းအဘ လူနည်းစုက လွတ်ထားရင် မင်းခေါင်းပေါ်တောင် ချီးတတ်ပါသွားဦးမယ်။
ပြသာနာဖြစ်သမျှလည်း ကြည့်လိုက် ဒီကောင်တွေ စ တာချည်းပဲ။ ဒီကောင်တွေ ဒီထက်များလာရင် မင်းအိမ်တောင် ဗလီဖြစ်သွားဦးမယ်။